Prapta: Eto ny zava-drehetra eo amin'ny fiainana | Martech Zone
Asabotsy, Aprily 21, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny lahatsoratro voalohany dia ny Prapta, tranokala tambajotra sosialy iray izay manamarika ny hoe “Eto daholo ny fiainana!” Mety ho izy ireo ihany koa no voalohany afaka nilaza fa “Tonga eto ny zava-drehetra ao amin'ny tambajotra sosialy sy tranonkala 2.0!” Ireo olona ireo dia niasa mafy tokoa!
Raha ny fahitana ny haitao, ny haitao ao aoriana Prapta Tsy zava-mahagaga izany. Ny tranokala dia Ajax 100%. Ireo forum, bilaogy ary hetsika hafa dia miorina manodidina ny fiainana ny fiainana ao amin'ny tambajotra. Fotoana tena mahafinaritra amin'ny tambajotra sosialy… fa tsy izaho, izaho, izaho na ianao, ianao, ianao, Prapta dia afovoany manodidina ny “we”. Izy ireo dia manangona ny fampahalalana rehetra amin'ny fampiharana manodidina traikefa.
Mino aho fa ny sokajin-taona kendrena Prapta angamba dia olon-dehibe tanora (antitra loatra aho ka tsy afaka mankafy traikefa toy ny adihevitra momba ny Absinthe etsy ambany! :).
Misy koa ny motera fikarohana matanjaka izay mifaninana misy serivisy mampiaraka amin'ny Internet. Alao an-tsaina ny fiarahana amin'ny Internet raha nanana bilaogy, fifanakalozan-kevitra, traikefa amin'ny fiainana, fandefasan-kafatra eo no ho eo, widgets ary fifampiresahana an-tserasera (ho avy tsy ho ela ny resaka) ary manana ianao Prapta! Raha toa ka mihazakazaka serivisy mampiaraka amin'ny Internet aho, dia mihozongozona amin'ny foko tokoa aho amin'ny vahaolana toy izao.
Na izany aza, ny zava-drehetra amin'ny famerenana dia tsy mety rôzy? Na dia nihazakazaka aza ny fampiharana (tena nisy izany - tsy nanana olana mihitsy aho), heveriko fa misy fotoana lehibe hanatsarana ny hatsaran'ny fampiharana. RNH, Web 2.0 dia tsy momba ny interface Ajax fotsiny, fa momba ny fahatsorana sy mora ampiasaina ihany koa.
Ny sary famantarana ho an'ny Prapta fuzzy sy uni-dimensional. Mitsangana ihany koa ny sary famantarana raha marindrano kosa ny ankamaroany ka tsy mifanaraka amin'ny toerana misy azy izany. Izay rehetra eo amin'ny efijery dia feon-mono, tsy misy refy, gradients na alokaloka. Tsapako fa ny ampahany amin'io dia noho ny fahaizana manamboatra ny pejy fa mamela fisaka kely (apetraka) ny fampiharana.
Manoro hevitra ny fifandraisana misy lohahevitra mavesatra aho fa tsy ny safidy fanamoriana ankehitriny… avelao ny olona hanova ny zava-drehetra fa tsy ny endritsoratra, ny haben'ny endritsoratra ary ny lokon'ny pejy fotsiny. Ny Web 2.0 dia momba ny fanehoana ny tenanao - izany no mahatonga ny tambajotra sosialy tena malaza. Ary koa, ny fametrahana singa sasany dia be olona fa tsy fitetezam-paritra. Ohatra, ny font sy ny fanaingoana ny loko dia tsy manome ahy tsara:
Izany dia nilaza fa tsy maintsy manome aho Prapta ny naoty avo indrindra azo atao raha ny fahaizan'ny fampiharana fa tsy ny estetika. Fandraisana andraikitra mahatalanjona ity ary mendrika ny homena voninahitra ireo mpamorona! Ny fampiasam-bola amin'ny mpanakanto kanto manana traikefa amin'ny fampiharana an-tranonkala dia hampandeha ity fampiharana ity ho any amin'ny mahazatra sy malaza. Heveriko fa izany ihany no antony tsy nahenoako Prapta alohan'ny!
Torohevitra farany farany: Tsy mila hampiroborobo ny vahaolana amin'ny Ajax na Web 2.0. Tsy hampiasa ny fangatahanao ny olona noho ireo antony ireo. Ampahafantaro ny tranonkala hoe inona izany - toerana mahafinaritra hizarana traikefa, hifanakalo hevitra momba azy ireo, ary hahitanao ny hafa!
Mifantoha amin'ny API hampitombo ny fampiharana anao (Del.icio.us sy Technorati)